ပန်းတနော် အစုကြီးရွာ မြင်ကွင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပန်းတနော် အစုကြီးရွာ မြင်ကွင်း
ပန်းတနော် အစုကြီးရွာ မြင်ကွင်း
Posted by weiwei on May 2, 2012 in Photography, Travel | 25 comments
wei's photos ရွာအလှူ အမှတ်တရ
ကျွန်မက ခရီးသွားရင် ကားပေါ်ကနေ မြင်ရသမျှကို ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ၀ါသနာပါပါတယ် … လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်များပေါ့ … ပန်းတနော်ကနေ အစုကြီးကို တစ်နာရီလောက် ကားစီးခဲ့ရပါတယ် … အိမ်ခြေ တစ်ထောင်ခန့်ရှိတဲ့အစုကြီးရွာနဲ့ ရွာအသွားလမ်းတစ်လျှောက် ဓါတ်ပုံတစ်ချို့ကို မလိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ကြည့်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ပန်းတနော်မှ အစုကြီးရွာသို့ အသွားလမ်းမှ လမ်းဘေးဝဲယာစိုက်ခင်းများ
ဓါတ်ပုံထဲမှာ တော်တော်လှနေတဲ့ ငရုတ်သီးများ
ဆေးရုံရှေ့စင်ပေါ်မှာ ကဲနေကြတာ ဘယ်သူတွေများလဲမသိဘူး ..
ဆေးရုံရှေ့မှ စပ်စုနေတဲ့ ကလေးငယ် ၂ ဦး
ဆိုင်ကယ် ကယ်လီရမည်တဲ့ ..
အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့် ဒီလောက်ပဲ တင်နိုင်ပါတော့တယ် …
အန်တီဝေအတွက် အတော်တန်ဒယ်နော်… အစားကောင်းလည်းစားရ၊ (ဂျိုင့်နဲ့လည်းပါဆယ်ဆွဲသေး… ပြောနေဂျတာ..ယုံပါဘူး) ဓာ့ပုံတွေလည်း ရိုက်ခွင့်ရသေး..။ နောက်တာဘာဗျာ အတည်ပြောဒါ ဟုတ်ဖူး နောက်တာ အတည်နော်.. :cool:
ကြယ်နှစ်ပွင့် ကိုကြောင်ကြီး …
” ဆေးရုံရှေ့စင်ပေါ်မှာ ကဲနေကြတာ ဘယ်သူတွေများလဲမသိဘူး ”
မြှောက်ပေးတဲ့သူကလည်း မီးကုန် ယမ်းကုန် ကို မြှောက်ပေးခဲ့ပုံ ရတယ် ။
ရှေ့စင်ပေါါ်က အကျီင်္အပြာရောင်နဲ့က မိတိုက်ပါ …
ဟိုးးး ညာဘက် စင်လေးပေါ်မှာ ဂစ်တာကိုင်ပီး ဟန်ရေးပြနေတာကတော့ ဖရဲမဖြစ်ပါ၏
အဲဒီ ရွာမှာအများစုက ငရုတ်သီး စိုက်တာများပါတယ်တဲ့ ……
ပုံလေးတွေက စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ကြည့် ရတာမျက်စိအေးပါတယ်
ဒါနဲ့ အလှူမှာပါဝင်ခဲ့ ကြတဲ့ ရွာသူ/သားပုံတွေပါတင်ပေးစေလိုပါတယ်..
အမ ဝေေ၀ရဲ့ ပုံလေးတွေတော့အရင်မြင်ရပီနော်…
“ဒါနဲ့ အလှူမှာပါဝင်ခဲ့ ကြတဲ့ ရွာသူ/သားပုံတွေပါတင်ပေးစေလိုပါတယ်.”
ဆိုတဲ့ အဆိုကိုထောက်ခံပါတယ် နောက်ကျော ပုံတွေတော့ အလုပ်နဲ့နော်
အပြန်ခရီးမှ မိုးအုံလာတယ် အဲဒီ ဓါတ်ပုံလေးကို ကြိုက်လို့ ယူသွားပါဒလယ်
ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ကင်မလာအကောင်းစားကြီးတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေတင်တဲ့အခါမှသာ စောင့်ကြည့်ပါလို့ …
ကျွန်မကင်မလာလေးက ခပ်စုတ်စုတ်နဲ့ ကြုံရာကို ခလုတ်နှိပ်ခဲ့တာမို့ ရွာသူားတွေက မလှဘူးလို့ ပြောကြမှာစိုးလို့ပါ …
အခုပုံတွေက ရှေ့ပြေးအဆင့်ပေါ့ ….
အိုးဟိုး ရွာထဲက ဒါ့ပုံရိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ သွက်လက်မှုကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေရင်း မမဝေေ၀ရဲ့ ဒါ့ပုံများကို အားပေးသွားပါကြောင်း…….
သူရဇော် (ဆင်တူရိုးမှားအတုအပ အထူးသတိပြုပါ)
နံပါတ် ကိစ္စ မရှင်းမရှင်းနဲ့နော်။
မဆူးရေ ခပ်ဆင်ဆင်လေးပေါ်နေသဖြင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် ၂၁၄၅၁ ယခုတော့ မြန်မာလို သူရဇော်မှသာလျှင် စစ်မှန်သည်ဖြစ်ကြောင်း
ပုံတွေ မြင်ရတာ အားရစရာ ကောင်းလိုက်တာ.. ရွာကို သွားတဲ့ လမ်းမှာ ရာဇာကျော် ဆင်ကြီး ထွက်သွားတော့.. ချာတူး ပြောတာ သတိရမိတယ်။ အောက်က ဆင်ထက် အပေါ်က မျောက်တွေက ပိုဆိုးတယ်တဲ့.. အားလုံး ပျော်နေကြတော့ အရမ်းကို ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်နေမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
အမငီး အပေါ်ကမျောက်တွေတဲ့ ပြောရက်လိုက်ထာအေ…….. အေးလေ သများတို.ကလဲ မျောက်ရှုံးနေတာကိုးးး အဟင့်
ပန်းတနော်ဘက်တော့ မရောက်ဘူးသေးဘူး၊ ရောက်ဘူးချင်လိုက်တာ.. သာယာတယ်နော်၊ ပုံလေးတွေမျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်၊
ကျနော် ကိုပေါက် ပါ။
ပျော်ရွှင်စွာ နေတာကိုမြင်ချင်လို့ သူတို့နဲ့အတူကားနောက်ခန်းမှာ တစ်ချိန်လုံးနေပြီး
သူတို့နဲ့အတူ သီချင်းတွေဆိုလက် လက်ခုပ်တီးလိုက်အော်လိုက်။
မလိုက်ဖြစ်သူများ ပျော်စရာကောင်းသော လက်ဆောင်တစ်ခု မရလိုက်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါ၏
ရှူခင်း တွေ က လှလိုက်တာ၊
နဂို လွမ်းမပြေဖြစ်နေသူကို အမိမြေ က သဘာဝ အလှ လေးတွေ က ပိုပြီး မီးလောင်ရာလေပင့်ပေါ့။ :-(
ရွာသားတွေပျော်ရွှင်နေကြတာမြင်တော့ ကျွန်တော်လဲ ရောရောင် ပျော်ရွှင်မိတယ်…
နောက်ထပ် ဒီထက်မက ပျော်ရွှင်ဖို့ရာ စုတောင်းနေမိတယ်……
အဲ့လိုမျိုး ရွာလေးတွေကိုတကယ်ကိုမရောက်ဖူးတာပါ နောက် ဘယ်ကို ဘဲသွားသွားပါ စနိုးကိုလည်း ခေါ်နော် တကယ်မလိုက်ရလို့ စိတ်တိုတယ် မစူးစမ်းတာလည်းပါတယ် စာမဖတ်တာလည်းပါတယ် အဆက်သွယ် မရှိတာလည်း ပါတယ် သူတို့သိတဲ့သူလေးတွေကျတော့ ဖုန်းဆက်ပီးလိုက်ခဲ့ပါလား ဆိုတော့ စာဝင်မဖတ်လိုက်တဲံသူလည်း အဲ့ခရီးမှာ လိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ နောက်တခေါက် မန်းဂေ ဇက်ရွာသူ/သားတွေ ဘယ်ခရီးဘဲသွားသွားလိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ် ။